बाबुराम र उपेन्द्रले हारगुहार गर्दा पनि किन भेटेनन् विजय चौथाईवालेले? चीन र इयुले यसरी डुबायोNepalpana - Nepal's Digital Online
बाबुराम र उपेन्द्रले हारगुहार गर्दा पनि किन भेटेनन् विजय चौथाईवालेले? चीन र इयुले यसरी डुबायो
नेपालपाना भाद्र १० २०७८
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निमन्त्रणामा आएका भारतीय सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीका बिदेश बिभाग प्रमुख बिजय चौथाईवाले जनता समाजवादी पार्टी नेपालका शिर्ष नेतृत्व पुर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवलाई भेटघाट नगरी फर्किएका छन् ।
नेपालका राजनीतिक दलसँग सबन्ध सुधार गर्ने उदेश्यसहित भारतीय प्रधानमन्त्रीका विशेष दुतका रुपमा आएका भाजपा बिदेश बिभाग प्रमुख चौथाईवाले मुलुकका सबैजसो प्रमुख नेतासँग भेटघाट गरे पनि पुर्व प्रधानमन्त्री भट्टराई र यादवसँग भने भेटघाट गर्न अस्विकार गरेका हुन । ‘भट्टराईसँग धार्मिक मामिलामा चौथाईवालेको सामाजिक सञ्जालमा बिबाद भएको थियो, भट्टराईले हिन्दु धर्मको आलोचना गरेको भन्दै उहाँ क्रुद हुनुहुन्थ्यो,’ चौथाईवाले निकट स्रोतले भन्यो, ‘बिगतमा उपेन्द्रजीको पार्टी महन्थ र राजेन्द्रले जोगाईदिएको तर अहिले मौका पाए पछि जसले पार्टी जोगाई दियो, उसैलाई निकालि दिएकोमा भाजपा असन्तुष्ट रहदैँ आएको थियो ।’ उनका अनुसार जसकारण चौथाईवालेले भट्टराई र यादवलाई नभेटी आज भद्रपुर हुदैँ नयाँ दिल्ली फर्कनेछन ।
गत साता प्रधानमन्त्री देउवाको निमन्त्रणमा आएका भाजपा बिदेश बिभाग प्रमुखले प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणासँग राखी (रक्षा बन्धन) बाँधेका थिए भने प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एनेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, एमाले नेता बिष्णु पौडेल, गृहमन्त्री वालकृष्ण खाँड, कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिसँग व्यक्तिगत रुपमा भेटघाट गरेका थिए ।
चौथाइवालेले गत आइतवार नेपाल आई सुरुमा प्रधानमन्त्री देउवासँग भेटघाट गरी छलफलको सुरुवात गरेका थिए । आजै उनी भद्रपुर, झापा हुँदै वागडोरा अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थल पुग्ने र त्यहाँवाट नेपाली नेताले दिएको राजनीतिक सन्देशसहित नयाँ दिल्ली पुग्दैछन् ।
किन भेटेनन् ?
चौथाईवाले निकट स्रोतकाअनुसार यादवले भेटका लागि आग्रह गरे पनि उनले त्यसलाई अस्विकार गरेका थिए । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका यादवको भारतसंग उतार चढावको सम्बन्ध छ । उनलाई कतिपयले भारत विरोधी भएको आरोप समेत लगाउने गर्दछन् । तर, यादवको विभिन्न कालखण्डमा भारतसंग सुमधुर सम्बन्ध समेत रहेको देखिन्छ ।
मधेशका चतुर खेलाडी यादवले आफूलाई पर्दा भारतको सहयोग लिने गरेको तर,आफ्नो जस्तो हुँदा भारतको सुझावलाई ग्रहण नगरेको बताइन्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समाजवादी पार्टी विभाजन गर्न अध्यादेश ल्याउँदा यादवले लैनचौरदेखि दिल्लीसम्म सहयोग मागेको स्रोतको दावी छ । त्यसलाई रोक्न दिल्लीले भूमिका खेलेको थियो । पार्टी विभाजनको लागि लागेका नेताहरु इस्तियाक राई, प्रदीप यादव, रेणु यादवहरुलाई भारतले नै पार्टी विभाजन नगर्न चर्को दबाव दिए पनि उनीहरु पछि हटेको स्रोत बताउँछ ।
भारतकै मध्यस्थतामा त्यसबेला समाजवादी पार्टी र राजपाबिच एकीकरण भएको थियो । जबकी राजपा अध्यक्ष मण्डलका ६ मध्ये ४ जना अध्यक्ष एकीकरणको पक्षमा थिएनन् । भारतीय संस्थापन निकट स्रोतले बताएअनुसार भारत मधेशी दलहरू एक रहुन भन्ने चाहन्छ । त्यतिमात्र होइन व्यक्तिगत स्वार्थले पार्टी नफुटोस र मधेशी दलहरु निर्णायक शक्ति बनोस् भन्ने भारतीय चाहना छ । तर, पछिल्लो समय मधेशी दलसमेत विभाजित भएका छन् ।
‘जसपा अध्यक्ष यादवसँग सम्बन्ध बिग्रको सरिता गिरीलाई पार्टीबाट निस्काशन गरेदेखि नै हो । त्यसपछि मधेशको मांग सम्बोधन गर्न तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओली तयार रहे पनि त्यसको विरोधमा उपेन्द्र लाग्नुभयो । महन्थ ठाकुरर राजेन्द्र महतो समेतलाई पार्टीबाट निष्काशित गर्ने काम भयो । यो कुरा दिल्लीले सिरियसली लिएको छ । त्यसैले उपेन्द्र बाबूरामसंग सम्बन्ध नराख्ने निष्कर्षमा विजेपी पुगेको हो,’ चौथाईवाले निकट स्रोतले भन्यो ।
भारतमै अध्ययन गरेका नेता बाबुराम भट्टराईसँग त चौथाईवालेको व्यक्तिगत सम्बन्ध नै खराब छ । उनीहरुबिच सामाजिक संजालमै भनाभन भएको थियो । बाबुरामले आफ्नो ट्विटर र फेसबुकमार्फत हिन्दू धर्म र आस्थामाथि चोट पुग्ने गरि लेख, र स्टाटस लेख्ने गरेको, भारत सरकारको आन्तरिक नीतिहरूको पनि विरोध गरेको भन्दै उनीसँग औपचारिक सम्बन्ध नराख्नेमा भाजपा पुगेको स्रोतको दावी छ ।
मुख्यत चौथाईवालेले बाबुराम र उपेन्द्रलाई नभेट्नुका ५ कारणमा अनावश्यक रुपमा भारत विरुद्ध बोल्नु, नेपाल भारत सम्बन्ध नै विग्रिने गरी क्रियाकलापहरू गर्नु । हिन्दु धर्म विरुद्ध कठोर हुनु । चिनियाँ राजदूतसँग सम्बन्ध बनाएर चिनियाँ 'हण्डी' खाएर प्रदीप यादवलाई ६ महिना निलम्बन गर्नु र सरिता गिरीलाई पार्टीबाट निकाल्नु । गठबन्धनको सरकार बनिसकेपछी चिनियाँ राजदूतलाई हात्तीबनस्थित आफ्नै अपार्टमेन्टमा बोलाएर भेट्नु । १ वर्ष पहिला केही सांसदहरुले पार्टी फोड्नै लाग्दा लैनचौर पुगेर दिल्ली सम्मलाई कन्भिन्स गरेर महन्थ ठाकुरसँग पार्टी एकताका लागि हारगुहार गर्नु र अहिले त्यही महन्थ ठाकुरलाई दल बिहीन बनाउने षड्यन्त्र गर्नु र ठाकुर विरुद्ध अनावश्यक टीकाटिप्पणी गर्नु हो ।
भाद्र १०, २०७८ बिहिवार १२:४७:४० बजे : प्रकाशित